Qoraalkaan qof ama qabiil ama qaaruun gaar ah lagu xaman mayo, ee waa dan guud.
Inta aynaan jinniyada ka faalloon ayeynu ereyada ay jinka iyo insigu in loo adeegsado ku kala duwan yihiin macnaynaynaa, si looga faa’iidaysto luqadda jinka u gaarka ah. Dadka dhaddig iyo dadka lab waxaa jira erey ka dhexeeya oo ah ”qof”, kaas oo xagga geela la mid ah ”tulud”, xagga xoolaha oo dhanna la mid ah ”neef”. Xagga jinka markii loo leexdo waxaa jira magac jinka dhaddig iyo jinka labba lagu ismo, oo ah ”nabsi”, isla markaas waxaa jira magac dhaddigga jinka u gaar ah oo ah ”bilis” iyo magac labka jinka u gooni oo ah ”joohaar”.
Haddaba daraasaddaan jinka ku saabsan dhexdeeda haddii lagu arko ”nabsi” waxaa looga jeedaa ruux jin ah, isla markaas ”bilis” waa jin dhaddig oo sida badan xaas ama garoob ah ama la guursan karo oo ay naasihii u soo baxeen, laakiin jinka gabdhihiisa yaryar oo foodleyada ah laftooda waxaa lagu magacaabaa ”bilis” oo magac u gooni ah ma ay laha. Jinka labka ah waxaa la yiraahdaa ”joohaar”, oo markii uu sirqoobo ama uu duqoobo loo yaqaan ”hunbul”.
Dadka iyo jinku waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah in uu jinka miisaankiisu aad u fudud yahay markii kor loo qaado ama uu miisaan ku istaago. Insiga qof aad u culus oo uu miisaankiisu gaaro labo boqol oo kiilo haddii dheerarkiisa iyo ballaarkiisa la cabbiro, oo dabadeed ”nabsi” jinka ka mid ah oo qofkaas dhinac kasta ka la’eg miisaan la saaro waxaa laga yaabaa in uu nabsigaas miisaankiisu noqdo ugu badnaan nus kiilo!
Haddaba cilmi ahaan markii loo baaray sababta uu miisaanka jinku u yar yahay waxaa la ogaadey in uu culays kasta sabab u yahay dhulku, oo uu dhulku wax kasta oo aan jinka ahayn hoos u jiito, dabadeedna uu miisaankuba yahay jiidashadii dhulka, taas oo uu macneheedu yahay in uu dhulku yahay waxa qiimeeya culays walba, oo shay kastaa uu helo intii uu dhulku u garto ee uusan asagu xor u ahayn in uu miisaankiisa si xor ah u maamusho, taas oo caddaynaysa in uu dhulku keligitaliye yahay oo uu ka daran yahay jeneraal Maxamed Siyaad Barre.
Jinku wuxuu haystaa xorriyad aysan asaga iyo dhulku xagga miisaanka isku saqajaamin, oo culayskiisa waxaa maamusha maskaxdiisa. Haddaba muxuu yahay culayska yar oo la dareemo markii ”nabsi” jinka ka mid ah kor loo qaado iyo miisaanka yar oo markii uu ”nabsi” miisaan ku istaago ku qormaa?
Maaddaama uu jinku xor yahay wuxuu markii kor loo qaado isu yeelaa xoogaa miisaan ah oo uu dadka ku maaweeliyo, ee haddii uu rabo wuxuu miisaankiisa ka dhigi lahaa eber ama inta uu hal malyan oo kiilo iska dhigo ayaa qofkii qaaday ama miisaankii uu fuulay ayaga oo daqiiq budaysan ah la arki lahaa!
Insiga iyo dhulku waa isku mid oo markii ay dhintaan dhulka ayey dadku galaan, isla markaas inta ay nool yihiin waxay ku nool yihiin biyaha iyo baadka dhulka. Intii aysan insigu dhalan xataa dhulka ayey ka mid ahaayeen, oo waxaa laga abuuray wasakh uu dhulka tufay, dabadeedna waxay ku koreen dhidid dhulka ka soo fufay. Sidaas darteed ayuu dhulku u diidey in uu xoreeyo dadka, maxaa yeelay iskuma ay filna oo asaga ayaa gogol iyo gasiin u ah ama hoyaad iyo hunguri u ah ama akal iyo arradtir u ah.
Dadku waxay jinniga kaga horreeyaan xagga ganacsiga, oo dadka badeecaddooda waxaa la isugu gudbiyaa maraakiib iyo diyaarado waayeyn, iyo weliba qalab badan oo dhulka hoostiisa iyo korkiisa mara, laakiin jinnigu weli waa garabrarato oo wuxuu badeecadaha isugu gudbiyaa in uu tunka ku xammaalo ama uu awr jin ama dibiyo jin ku rarto.
Inta aynaan gaadiidka jinka ka faalloon ayeynu xoogaa ka taabanaynaa in uu jinku gaadiidka insiga si qarsoodi ah ugu rarto alaab aan loo jeedin, ayna racaan nabsiyo badan oo rakaab ahi. Tusaale ahaan tareennada dhulka hoostiisa mara waxaa raaca jinniyo fara badan oo kuraasta bannaan ku fariista ama tareennada dushooda sare fuula, maaddaama aysan qabowga iyo kulaylka midna xanuujin jinka, isla markaas uusan ogsojiin u baahnayn.
Maraakiib badan oo qaaradaha u kala goosha ayaa waxaa si dhuumasho ah loogu rartaa alaabooyin qaali ah, oo aysan dadku u jeedin, waxaana alaabooyinkaas ugu daban waxyaalaha ay dumarka jinku isku qurxiyaan iyo jeegag iyo tanuug ay ka buuxaan oodkac iyo sixin laga keenay xoolaha jinka ku dhaqan qaaradaha uu ku badan yahay jinka xooldhaqatada ahi. Xataa maraakiib ay insigu dagaal u samaysteen buu jinku wuxuu ku fushadaa arrimo ganacsi.
Jinka dhexdiisa lagama yaqaan alaabo koontarabbaan ah, oo daroogooyinka ugu qaalisan baa waxaa lagu gadaa suuqyo caalami ah oo jinka ganacsiyadiisa ugu waaweyn lagu kala fushado, waxaana daroogooyinka ugu muhiisan lagu xanbaaraa diyaaradaha ugu waaweyn oo u kala goosha qaaradaha insiga, isla markaas dhagxanta dheemmanta iyo amaroolka oo insiga suuqyadiisa qaaliga ka ah waxaa dalalka saboolka ka xada ganacsatada ugu waaweyn ee jinniga.
Maddaama aysan daroogada iyo macdantu suuqyada jinka qaali ka ahayn ayey jinniyada qaarkood waxay xariir ganacsi la leeyihiin insiga qaarkood, waxaana alaabta kastamada ka gudbiya khubaro jin ah, oo lacag yar ka qaata dad maafiyo ah oo sida badan ka soo jeeda qaaradaha Yurub iyo Ameerika.
Badeecadaha dadka dhexdooda suuqa madow lagu kala gato waxaa si sahlan u kala gudbin kara jinniyo aad galgal u ah, oo og meel kasta oo laga heli karo daroogooyinka culculus iyo macdanta fiicfiican, waxaana isla jinniyadaas loo adeegsan karaa in ay soo jaajuusaan xeryaha ciidamada insiga iyo warshadaha waaweyn, iyo weliba ganacsiyada halista ah.
”Joohaar” da’ weyn oo ka mid ahaa nabsiyo khubaro ahaa oo loo adeegsadey sirihii ciidamadii midowgii Sofyeeti ayaa wuxuu rag saaxiibbadiis ah u sheegay in ay fududdahay in insiga la jaajuuso, laakiin aysan jinniyadu ogayn sidii ay insiga dhexdiisa ugaga shaqaysan lahaayeen xirfadda jaajuusnimada oo ah munaafaqnimada ugu weyn oo adduunka ka jirta.
Jinnigu xagga lacagaha waa uu ka ilbaxsan yahay insiga oo doollarka maraykanku suuqyada jinka wuxuu la mid yahay lacagaha jinka kuwa ugu caalamisan sida lacagta ”gumaar” loo yaqaan oo wax lagu kala gato inta badan suuqyada jinka. Sidaas awgeed lacagaha uu jinku ku helo jaajuusnimada iyo suuqa madow waxaa marka hore lagu mulkiyaa boorsooyin yaryar oo kuwa dukumentiga xoogaa ka gudo ballaaran, dabadeedna waxaa toos loola abbaaraa bangiyada jinka.
Ganacsiga aan tuugaysiga ahayn oo aan insiga xariirka la lahayn waxay jinku ka mutaan dhibaatooyin badan, oo badaha waxaa lagaga gudbiyaa in uu la duulo nabsi xoog badan oo jinka ka mid ah, wuxuuna ku nastaa jasiiradaha fogfog. Sanad kasta waxaa la waayaa kumannaan nabsi oo badeeco ula kala duulay qaaradaha jinka. Sida badan nabsiyada badaha korkooda duulaa waa joohaarro, laakiin waxaa mudooyinkaan danbe soo badanay biliso qararaf ah oo la duula alaabo qaali ah.
Awrta jinka lafteedu waxay duuli karaan xoogaa, oo badaha yaryar waxaa habeen kasta dul mara awr shixnadan, laakiin dibiyada jinku aad uma ay duulaan, oo waxaa lagaga ganacsadaa birriyada jinka, waxaana lagu xammaalaa qalabka dhismaha magaalooyinka jinka iyo cuntooyinka uu jinku jecel yahay sida basasha iyo gocosada.
Nabsi joohaar ahaa oo sannaddii 2000 ku geeriyoodey madaxtooyada dalka Jibbuuti agteeda, oo shil baabuur ku dhintay ayaa intii uusan dhiman waxaa laga duubay barnaamij xiiso badnaa, oo geeridiisii ka dib laga soo daayey idaacad caalamka jinka aad looga dhegaysto oo magaceeda la yiraahdo ”Dumaashi”, oo ah warbaahin maqal iyo muuqaal isugu jirta.
Barnaamijku wuxuu ku saabsanaa alaab nabsigaasi la duulay oo isugu jirtey qaar ay insi lahaayeen iyo qayb ay jin lahaayeen, oo uu kula degey jasiirad yar oo ku taal meel fog oo fog. Qorraxdu markii uu joohaarku jasiiradda ku degtey waxay dhulka u jirtey labo tillaabo, oo casar gaaban bay ahayd. Markii uu alaabtii dhulka dhigay buu istaagey, wuxuuna arkay hooskiisii oo asaga ka dheer oo dhanka qorraxdu ka xigto ma aha ee dhinaca kale ku hurda caws cagaaran korkiis.
Wuxuu damcay in uu hooska hurdada ka toosiyo, oo uu madaxa ka taabto, wuxuuna gaari waayey madaxii hooska. Cabbaar markii uu cayrinayey oo uu hubsaday in uusan hoosku hurdin buu wuxuu damcay in uu qorraxda u tago si ay hooska isugu celiyaan asaga iyo qorraxdu oo ay u qabtaan. Markii uu qorraxda xaggeeda cabbaar u orday buu gadaal soo eegay si uu hooskii in uu libray iyo in kale u fiiriyo, mase hooskii asaga ayuuba soo dabasocdaa. Inta uu farxay buu hooskii ku laabtay oo wuxuu moodey in uu hoosku u soo hanuuney, laakiin hoosku daacad ma uu ahayn oo asaga oo jiifa ayuu orday
Qorraxdii buu canaantay oo wuxuu rabey in ay hooska madaxiisa soo istaagto si ay asaga iyo qorraxdu u hareereeyaan hooska fallaagada ah, laakiin qorraxdu ayada oo aamusan oo sii qaboobaysa ayey biyaha badda in ay quusto rabtey oo tartiib u socotey.
Wuxuu soo xasuustay in uu jasiiradda ugu degey in uu ku nasto ee uusan hadafkiisu ahayn in uu hoos iyo qorrax uu midba dhinac u sii socdo ku dhexdaalo. Cawshii uu hoosku dul jiifey buu asaguna ku jiifsaday, wuxuuna arkay hooskii oo intii hore ka gaabtay oo hoostiisa yaal. Xanaaqii uu u qabey buu kula dhacay, oo feer buu hooska madaxiisa ku daldalay, laakiin feerku wuxuu ku dhacayey caws cidla ah oo malaha hoosku hoos jin buu ahaa!
Qorraxda midadkeedii caddaa wuxuu noqday gaduud, waxaana badda ka sokaysa ku waal wadda cad oo ay ayadu samaysay. Marba marka ka danbaysaa waxaa isku farxaya ayada iyo badda. Jasiiradda iyo cirka mid waa uu cagaaran yahay, midna waa baluug. Waa jasiirad dheer oo ay biyaha baddu habeen iyo maalin ku hareeraysan yihiin, waxaana gees kasta ka garaaca biyo dhanaan oo haraacinaya.
Markii ay insigu tagaan magaalo jin waxaa ugu badan oo la dareemaa waa dugsi iyo udgoon badan. Wax dhaxan ah ma leh magaalooyinka jinku oo jawiga qandac yar baa la dareemaa, isla markaas kulayn diirran lama dareemo ee waa cimilo laddifan oo uu jirku jeclaado in uusan weligiis ka baxin. Oogada dadku waxay cimilada jinka u jeclaataa sida ay isu jecel yihiin habeenka iyo maalintu oo ay isu dabasocdaan mar kasta ama ay isu jecel yihiin labo xiddigood oo habeen jumce ah isku aroosay fillo gaduudan oo cirka dhexdiisa ku taal.
Markii uu qofku jawiga jinka galo waxa uu dareemo qoraal iyo qawl laguma qeexi karo, ee waxaa dareemi kara qofkii laga furo albaabbada jinka oo lagu soo dhaweeyo magaalo midabbo badan oo ay leeyihiin walaaleheenna jin oo ah sokeeye uu qalbigoogu jilicsan yahay. Soodhaweynta jinku wadnaha ayey ka timaaddaa, waxaana laga dareemaa wadnaha la soodhaweeyey. Waxay deggan yihiin magaalo ay biyeheedu ka duwan yihiin biyaha ay insigu isticmaalaan. Biyaha jinka midabkoodu wuxuu u eg yahay qaansoroobaad, waana biyo aan qaboobayn oo aan kululayn. Qabow iyo kulayl keli ah bay insigu yaqaanniin, laakiin jinnigu waxyaalo badan buu yaqaan.
Markii biyaha jinka la kabbado waxaa la dareemaa jacayl badan oo loo qabo in biyaha jinka aan afka laga qaadin, waxaana indhaha xirribohooda qoysa ilmo jacayl oo uu wadnuhu u qabo in uu magaalada jinka sii joogo. In uu weheshado walaalaha jinka ah oo ayaguna jecel uu la joogo, oo biyaha macaan ku keena qof kasta oo martisharaf u ah.
Carrabka, maskaxda iyo qalbiga saddexduba waxay biyaha jinka u qabaan caashaq aysan weligood dareemin, indhuhuna waxay ku doogsadaan midabka biyaha, sankuna udgoonka biyaha jinka oo saxansaxada ka sii udgoon. Markii ay laabta qofka biyaha jinku marayaan wuxuu jirka oo dhammi dareemaa in uu ka raystay gurihii insiga oo uu muddada dheer ku harraadnaa.
Jinku markii marti loo yahay ma uu yaqaan istutus, ee qalbi furan buu ku soo dhaweeyaa walaalaha insiga ah oo ku soo daaley dadkii itustuska badnaa, oo wax kasta ha lagaa sheego u samayn jirey. Wuxuu ka raysanayaa xaasidnimadii iyo nacaybkii ka jirey magaalooyinka insiga. Qabyaalad ma leh, xan ma leh, diradire ma leh, cuqdad ma leh, oo niyadda jinku waa saafi.
Marxabba, marxabba! Qalbi furan, gacno furan iyo albaabbo furan. Wuxuu casuman yahay magaalo jin, oo ay midabbadeedu badan yihiin. Midabbadii uu hore u yaqiin waxaa ka badan kuwa laga yaqaan magaalada jinka oo uusan magacyadooda aqoon. Indhuhu waxay u macaansanayaan fiirada midabbo aan gaduud ahay, oo aan madow ahayn, oo aan caddaan ahayn. Lama macnayn karo ee waa la dareemi karaa, waxaana dareemi kara qofkii booqsho gaaban ku gaara magaalada walaalihiisa jinka ah.